Ciidamada Kenya oo gacanta ku soo dhigay Nin ku eedeysan fal Argagixiso – Radio Daljir
Nofeembar 29, 2021 8:02 b 0
Warbixin ay dhawaan soo saareen laamaha amaanka Kenya ayaa lagu sheegay in muwaadin Irani ah oo lagu magacaabo Mohammed Saeid Golabi uu ku lug lahaa falal argagixisanimo oo ka dhacay gudaha Kenya iyo wadamada dariska ah.
Golabi, oo la rumeysan yahay inuu si joogto ah u booqdo Kenya iyo gobolka, ayaa lagu soo warramayaa inuu udub dhexaad u yahay qorshayaasha argagixsada ee lagu beegsanayo danaha maxalliga ah iyo kuwa Israel ee Kenya.
Ilo-wareedyo badan oo booliska ka tirsan ayaa Wargeyska Star u sheegay inay la socdeen dhaqdhaqaaqyada argagixisanimo ee Golabi iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisa deegaanka, waxayna ku qanceen inuu jiro xiriir ka dhexeeya isaga iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada.
“Waan soo bandhignay isaga iyo xiriirkiisa waqti ka dib. Waxaan haynaa sabab nagu filan oo aan ku aamino inuu la shaqaynayey kooxahaas argagixisada ah,” ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan Qaybta Booliska la-dagaalanka Argagixisada.
Golabi ayaa looga shakisan yahay inuu yahay sarkaal sirdoon oo Iran ah wuxuuna la shaqeeyaa koox Kenyan ah si ay u ururiyaan sirta ka dhanka ah xarumaha gaarka ah iyo kuwa dowladda labadaba iyadoo la doonayo in la weeraro.
Cabduweli Gaas: “Waxaan soo jeedin lahaa in la hakiyo doorashada Golaha Shacabka”